DAAWO SAWIRRO: Faah-faahin cusub iyo wararkii ugu dambeeyay diyaaradii maanta Shilka ku gashay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Faah-faahin cusub iyo wararkii ugu dambeeyay diyaaradii maanta Shilka ku...
DAAWO SAWIRRO: Faah-faahin cusub iyo wararkii ugu dambeeyay diyaaradii maanta Shilka ku gashay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde
Muqdisho (Halqaran.com) – Diyaarad nooca xamuulka ah ayaa waxay maanta shil aan buurnayn ku gashay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, ka dib markii ay lugaha u bixi waayeen.
Diyaaradan oo dooneysay in ay ku cararto Run way-ga Garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa la soo sheegaya inaanay taasi u saamixin, sababo ku aadan cagaha oo ay la soo bixi weyday.
Duuliye-yaashii diyaaradda ayaa ku khasbanaaday in diyaaradda ay xabadka dhulka u dhigaan, iyadoo aanay khasaaro ah ka dhalan.
Wararka ayaa waxay sheegayan in diyaaradda ay ka soo laabatay Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay, ka gadaal markii ay xamuul geysay degmadaasi.
Wararka ayaa waxay intaa ku darayan in shaqaalihii iyo duuliye-yaashii diyaaradda aanay waxba ku noqon shilka ka dhacay Garoonka Aadan Cadde, sidoo kalena aanu jirin wax dab ah oo diyaaradaasi ka kacay, shilka ka dib.
Maamulka Garoonka Aadan Cadde ayaa in muddo ahba xiray dhabaha ay diyaaradaha ku cararaan, si aanu shil kale uga dhicin Garoonka Somaliya ugu mashquulka badan. Shaqaalaha Garoonka ayaa diyaaradda ka wareejiyay Run way-ga garoonka.
Masuuliyiinta ayaan weli wax faah faahin ah ka bixin shilka diyaaradeed ee maanta ka dhacay Garoonka Aadan Cadde.
Garoonka Aadan Cadde oo mid caalami ah ayaa waxaa xilliyada qaarkood ka dhaca shilal aan buurnayn, inkastoo aanu garoonkaasi u horsamayn sidii la doonayay.
Diyaarad shil ku gashay